Vaovao - Ny vidin'ny vokatra ahitra artifisialy
Ny vidin'ny vokatra ahitra artifisialy
1. Ny vidin'ny vokatra ahitra artifisialy
Ny rindranasa samihafa dia samy manana ny takiana amin'ny famaritana, ary ny fandavana isan-karazany dia samy hafa ny vidiny. Ny fepetra manokana dia ny fitaovana, ny haavon'ny antontam-bato, ny dtex ary ny hakitroky ny zaitra.
Antony lehibe hiantraika amin'ny vidin'ny ahitra artifisialy:
Antony maro no miara-miasa hamaritana ny vidin'ny ahitra artifisialy. Fitaovana, lanja tarehy (Tapa-kevitra ny halavan'ny Pile, Dtex, ary ny Stitch Density) ary ny fanohanana no antony lehibe telo. Ny habetsahan'ny baiko dia hisy fiantraikany amin'ny vidin'ny famokarana koa.
Amin'ny ankapobeny, ny fitaovana ho an'ny ahitra ara-panatanjahantena dia tsy mitovy amin'ny fitaovana ampiasaina amin'ny ahitra eny an-toerana. Raha ny ahitra dia mijery tsara kokoa ny endrika ivelany (toa tsara toy ny ahitra tena izy, na tsara kokoa aza) fanoherana UV, ary fiarovana. Ankoatra izany,
Ny lanja amin'ny tarehy
Ny haavon'ny pile, Dtex, ary Stitch Density dia miara-miasa hamaritana ny lanjan'ny tarehy. Ny lanjan'ny tarehy dia singa iray lehibe manimba ny fahombiazan'ny ahitra sy ny vidiny. Mazava ny antony: ny lanjan'ny tarehy mavesatra dia midika fitaovana bebe kokoa ary miteraka vidiny avo kokoa.
Ny tohana fahita indrindra dia ny fanohanan'ny SBR sy ny polyurethane (PU). Ny fonosana polyurethane dia tsara kokoa nefa misy vidiny lafo kokoa (eo amin'ny USD1,0 eo ho eo isaky ny metatra toradroa). Ny fanohanan'ny latex dia ampy tsara amin'ny ankamaroan'ny tranga. Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny fanohanana ianao dia tsidiho azafady ny lahatsoratra Ny zava-misy momba ny fiompiana ahitra artifisialy.
Fotoana fandefasana: Dec-01-2020
No.666 Rongcheng Road Lutai faritra fampandrosoana toekarena, Distrikan'i Lutai, Tanànan'i Tangshan
Omeo serivisy aorian'ny varotra matihanina
X-Nature Grass dia nanatrika ny Cologne FSB 2019 ...